I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
ikhaya IFOOTBALL ELITE I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Elite eyaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Ikumkani". Iindaba zeMichel Platini yoBantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ibali lethu leMicheal Platini lelinye iqhinga elincomekayo elithathayo ekuhambeni kwakhe ekuphumeni ekugqibeleni ukuba udumo kunye nokuphela kabuhlungu kwenkqubela eyenziwe iminyaka. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UMichel François Platini wazalwa ngomhla we-21st kaJuni 1955 kuJoeuf, eFransi. Wazalelwa kuyise, u-Aldo Platini othe ngexesha lokuzalwa kwakhe wayengutitshala kunye nomqeqeshi webhola webhola. Ngakolunye uhlangothi unina kaMichel, u-Anna Platini wayengumdlali webartender eBar des Sportifs eguqulela njengebhodi yezemidlalo. Imvelaphi yentsapho ephakathi komgangatho wabazali bakhe ibonisa ukuqala okuthobekileyo kukaMichel.
Ukukhula kwintsapho encinci yentsapho kaMichel - njengabantwana abaninzi bexesha lakhe - bathatha inxaxheba yokuzithabatheka kwezemidlalo, uyise webhola kwaye wayevunyelwe ukuba adlale ibhola lezitalato kwisigxina.
Kungekudala ngaphambi kokuba athandwe phakathi koontanga bakhe waza wamkela igama lakhe leqhayiya "Peleatini"Ekuqaphelisweni kweendumiso ezithembekileyo kuye ngenxa yobungqina bakhe bebhola.
Kubonakala phakathi kwezakhono zobuntwana ayenakho ukukwazi ukubetha ibhola lebhola ezithatyathwa ngabahlali basekhaya lakubo njengengozi ebomini kunye neepropati.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ukunyaniseka kwentliziyo
Nangona kunjalo, uMichel wayenomdla malunga nokuba yintoni ibhola ekhatywayo kuye kwaye wenza okusemandleni akhe kwimidlalo. Emva kokufumana amava amaninzi kwibala lebhola ekhatywayo, uMichel wabeka iinqwelo zokuhamba ngokuzibandakanya kwiC FC Metz kodwa walahlwa yinkampani eyayingacingi ukuba yayingakwazi ukudlala ibhola ekwenkqeni yokuba intliziyo ebuthathaka.
Osemncinci kunye nesifiso, uMichel wayengesiye umntu oya kuvumela ithuba lokungena ngeminwe yakhe. Wabhikisha ngokuchaswa kwakhe yiqela kwaye wanikezwa ithuba lokubonisa ubungqina bakhe ngaphandle kwintsimi yokudlala kodwa ngokuphefumula emoyeni kumatshini oqhutywe ngudokotela ocebisi owenziwe yiC FC Metz.
Engakufuni ukunika ithuba elide, uMichel wanikeza uvavanyo ngaphezu kokusemandleni akhe kwaye waphazamisa imizuzu emibini kamva, uphuhliso logqirha walithatha njengobungqina bokuba unobungqina obuthathaka kunye nokulungiswa kokugatywa.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Career Buildup
Ephahlazekile, ephahliwe kodwa engapheliyo, uMichel wathabatha iinqununu zobomi bakhe waza wanikela ibhola lezemidlalo kwelinye iqela elaliyithemba ukuba uyamkelwa njengentliziyo yakhe engenakukwazi ukumela enye into enqatshelwe.
Ziziphi ezinye iiklabhu ezinokuqiniseka ngakumbi kunokuba NJENGOBA Nancy apho uyise wayesebenza njengelungu lebhola lokulawula ibhola lebhola?.
Njengoko izinto zaziza kuvela emva koko, ukuxilongwa kwemiphunga engalunganga kwicandelo le-Metz lobungcali laba yintlonelo yabamelwane kunye ne-AS Nancy Lorraine apho uMichel abeka khona imimangaliso eyambona waba ngumdlali ovelele okanye iqela lokudlala.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwegama
Kwakuku-AS Nancy ukuba uMichel waba nophuhliso oludlulayo kunye nezakhono zokukhawuleka, kunye nokugqiba amandla okugqiba, ukufaka iinjongo ze-98 kwimigqalano yeligi le-181. Kwiminyaka eyi-21 ubudala, uMitchel wenza iqela lakhe laseFransi kwilizwe lonke apho amanye amaqela eSizwe ngokukhethekileyo iCzech ayehlulwa yi-bullet-kick-kicks.
Amagama oDumo ahlamba xa uMichel njengomdlali kwiJuventus (emva kokuphefumula okuphumelelayo eStown Etienne) wathatha isigwebo kunye nomdla wokulwisana noLiverpool owawubonayo uhlangothi lwakhe lwaseYurophu. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ubundlelwane
Kukho ibhinqa elilodwa kwimbali yothando lukaMichel Platini aze abe ngumkakhe uKristoelle Bigoni.
UMichel wayesayidlala ngo-AS Nancy xa edibana nomfazi wakhe uKristelle, owayengumfundi wesayensi yezinto eziphilayo. Wayenomdla wothando kwaye akaze athobe ekuboneni nomyeni wakhe kwi-tracksuit yakhe eyahlukeneyo.
Esi sibini sitshata ku-1977 kwaye sahlala sitshatile ukususela ngoko.
Umanyano wabo usikelelwe ngeentsana ezimbini, uLaurent Platini kunye ne-Marine Platini.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Inhlekelele yeHeadsel Stadium
Inkundla yeHaselsel inhlekelele yayiyintlukwano phakathi kweLiverpool kunye ne-Juventus abalandeli, abone ukuba lo mva ugxininisa eludongeni owe wawa. Isiganeko esibuhlungu senzeke ngomhla we-29th ka-Meyi 1985, ekhokelela ekufeni kwabantu base-39-ikakhulukazi amaTaliyane kunye nabalandeli be-Juventus- ngelixa abanye bange-600 abanye balimala.
Ukubambisana okwenzeka ngomhla omnye kunye nendawo apho uMichelin Platini ufumene isohlwayo kunye negalelo elijongene neLiverpool ukuya kwinkomfa yaseYurophu eye yabangela ukuba uMichelin Platini angaboni ukugubha injongo yakhe yokuphumelela nangona ulahleko lobomi olubhalwe ngosuku olungabonakaliyo.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -I-Post-Professional Football Endeavors
UMichel Platini washiya umhlala-phantsi kwibhola lezemidlalo xa ekhulile i-32 ngoJuni 1987. Emva kweenyanga emva kokuthatha umhlalaphantsi, wathatha umsebenzi wokuqeqesha njengomphathi we-French National side kwi-1988 kwaye wabona iqela lakhe lifanelekile kwi-1992 Yurophu yaseYurophu kwakunye nerekhodi elimangalisayo lokuphumelela yonke imibala yeebhola ezisibhozo.
Phakathi kwe-1988 ukuya kwi-2006 Michel ujoyine i-UEFA kunye ne-FIFA zixhobo, ekhonza phantsi kweekomiti ezahlukileyo de ukuya kwi-2006, ephikisana naye aze anqobe uLennart Johansson isikhundla sokuba ngumongameli we-UEFA.
Ulawulo lukaMongameli wePlatinini lwaluhlala iminyaka eyi-8, iintsuku ze-255, ubude obude buhluke kakhulu kwiminyaka eyi-16 yokuhlala kwakhe ngaphambili, uLennart Johansson. Yintoni eyayenza ukuba isiFulentshi ingqondo idibanise ixesha layo njengomongameli we-UEFA; isifiso okanye imfuneko ?.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Ukunyanzeliswa kokubandakanyeka
I-Platini yayiyintandokazi yokufaka esikhundleni somongameli weFIFA, u-Sepp Blatter owatshiya kwi-2015, nangona kunjalo, i-duo (Platini no-Blatter) babetyala ngokutshatyalaliswa kweenkohlakalo, ukuphathwa kakubi, ukungqubuzana kwenzalo, ukuphendula okungamanga kunye nokungabambisani nekomiti yokuziphatha yeFIFA.
Uphuhliso luphelisa isiphando sika-Platini sokuba ngumongameli (njengoko wanikezelwa i-8-year ban banqatshelwe kwibala lebhola eliye lahliswa kwimihla ye-6), ukunika indlela uGianni Infantino owaphikisanayo kwaye wayinqoba isikhundla esiphambili. Kwakhona kwaholela ekutyunjeni kwakhe njengoMongameli we-UEFA emva kokungabikho kweminyaka emithandathu yokuvinjelwa kwebhola.
I-Michel Platini Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts -Amanye amaNqaku
Ukufuduka kwePlatin kwiJuventus ehlobo lase1976 kwakungekho esekelwe kwisivumelwano kodwa umrhumo wokumisela ngokomthetho waseFransi ngelo xesha.
Wafezekisa umdlalo onqabileyo wokubonakala kumazwe amabini kwimidlalo yamazwe ngamazwe. (IFransi neKwaiteni)
Ungumdlali omathathu weBalon d'Or. Oku kwenzekayo kwiminyaka; 1983, 1984 kunye ne1985.
Ebe Zinedine Zidane zithixo.
Ngethuba lakhe njengomlawuli webhola, wayenamandla ngokuchasene nokutshintshwa kwabadlali be-18 abangaphantsi kwelanga, abayijonga njengoluhlobo olungekho mthethweni lokurhweba abantwana.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Michel Platini yabantwana bebali kunye neengxelo ezingezizo. Kwi-LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
I-Sheikh Mansour Ibali loBuntwana kunye neNqaku leMbali ye-Untold Biography
U-Aleksander Ceferin Ibali leBantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts
I-Malcolm Glazer Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
IGianni Infantino Ibali leBantwana kunye neNgxelo ye-Untold Biography Facts